राष्ट्रपतिमा पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षकै प्रतिस्पर्धा — Ujyaalo Lalteen
गृहपृष्ठ » पत्रपत्रीका, मुख्य समाचार, राजनीति → राष्ट्रपतिमा पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षकै प्रतिस्पर्धा
राष्ट्रपतिमा पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षकै प्रतिस्पर्धा
October 27, 2015६०० पटक
१० कात्तिक, काठमाडौं । राष्ट्रपति निर्वाचनमा सत्तारुढ गठबन्धनको साझा उम्मेदवारले जित्ने सम्भावना देखिएको छ । मधेसकेन्द्रित दलले राष्ट्रपति निर्वाचनमा अनुपस्थित हुने निर्णय गरेकाले ‘क्रस भोटिङ’ नभएमा सत्तागठबन्धनको उम्मेदवारले जित्ने सम्भावना छ । बुधबार बिहान ११ बजेदेखि २ बजेसम्म संसद्मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनेछ । मंगलबार बिहान ११ बजेदेखि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने कार्यतालिका छ । राष्ट्रपति चुनावमा गोप्य मतदान हुनेछ ।
संसद्को तत्काल कायम पाँच सय ९७ संख्यामा दुई सय ४९ मत ल्याउने उम्मेदवार विजयी हुनेछन् । प्रधानमन्त्री चुनावमा एमाले, एमाओवादी, राप्रपा नेपाल, फोरम लोकतान्त्रिकलगायत १५ दलको गठबन्धन थियो । सोही गठबन्धनको तीन सय ३८ मत पाएर एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका थिए । प्रधानमन्त्रीको चुनावमा एक भएको सत्तागठबन्धन यथावत् रहेको एमालेको दाबी छ । ‘गठबन्धनका दल अझै एकढिक्का छन्, राष्ट्रपति चुनावमा सबैको एकै ठाउँमा मत खस्नेछ,’ एमाले सांसद राजन भट्टराईले भने, ‘अन्य केही दलले पनि समर्थन गर्ने सम्भावना छ । त्यसका लागि गृहकार्य भइरहेको छ ।’
प्रधानमन्त्री चुनावका वेला विपक्षीमा कांग्रेसका उम्मेदवारलाई संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा आबद्ध चार दलसहित केही साना दलले समर्थन गरेका थिए । मोर्चाले राष्ट्रपति चुनावमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको संघीय समाजवादी फोरमका प्रमुख सचेतक डा. शिवजी यादवले जानकारी दिए । संघीय मधेसी मोर्चामा आबद्ध तीन दलका पाँच सभासद्ले भने राष्ट्रपति चुनावमा सहभागी हुने–नहुने निर्णय गरिसकेका छैनन् । मंगलबार मोर्चाको बैठक बसेर निर्णय गर्ने सद्भावनाकी सभासद् डा. डिम्पल झाले बताएको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
प्रधानमन्त्री चुनावमा कांग्रेसका उम्मेदवारलाई समर्थन गरेका स्वतन्त्र सांसद चन्देश्वर झा राष्ट्रपति चुनावमा सहभागी नहुने भएका छन् । उनले घरायसी कामका कारण मतदानमा सहभागी हुन नसक्ने बताए । अन्य साना दलले भने उम्मेदवार हेरेर निर्णय गर्ने बताएका छन् । ‘विगतमा एकातिर मतदान गरे पनि राष्ट्रपति चुनावमा उम्मेदवार हेरेर मतदान गर्ने तयारी छ,’ दलित जनजाति पार्टीकी सभासद् यशोदाकुमारी लामाले भनिन्, ‘गोप्य मतदान गर्ने भएकाले कसलाई मत दिने भन्ने घोषणा गर्दिनँ ।’